Ny vahoaka efa noana nefa tsy avela hiasa mandritra ny herinandro indray. Notsindriany manokana tamin’izany ny tsy fahafahan’ny posiposy, ny bisikileta ary ny môtô scooter mivezivezy izay tena foto-piveloman’ny madinika rehetra. Toy ny maniraka ny madinika handroba izany, hoy izy ary handefasana mpitandro ny filaminana avy eo mba hameno ny fonja. Tsy mino ny hahatanterahan’ny frankofonia eto amintsika amin’io herinandro ho avy io izy. Mikasika ny fanandratana ny teny Frantsay manokana dia nomarihiny fa i Afrika Atsimo sisa no mankasitraka izany fa ny ankoatra izay dia efa nanome lamosina ny Frantsay avokoa.